သင်၏ Mac ကိုမည်သို့ရှင်းလင်းမည်နည်း - TELES RELAY
By Tele RELAY တစ်ခု On နိုဝင်ဘာ 20, 2020
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာ ၂၀h20 update ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း…
နောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် 19:2020 မှာ 18 နိုဝင်ဘာ 25 တန်းတူ * * _Francis_
သင်၏ Mac သည်အချိန်အတန်ကြာပျင်းရိနေပြီလား။ ၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပြီး၎င်းသည်သူသည်အိုမင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းကြောင့်သူ၏ hard drive သည်ပြည့်နေခြင်းကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်ရန်မသွားမီ၊ အနည်းငယ်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်သင်၏ drive ပေါ်တွင်နေရာလွတ်အချို့ကိုကြိုးစားပါ။ သင့်ရဲ့ hard drive ကိုမလိုအပ်သောဖိုင်များသုတ်ရန်နှင့်သင်၏ Mac ကို facelift ပေးရန်ကူညီရန်နည်းလမ်းများစွာကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ပထမ ဦး စွာမလိုအပ်သောသို့မဟုတ်ထပ်တူပြုထားသောတတိယပါတီ application များကိုဖယ်ရှားပါ။ အကယ်၍ သင်မသုံးပါကသင်၏ Mac နှင့်စံသတ်မှတ်ထားသောအပလီကေးရှင်းများကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်သည်။ iMovie, iPhoto, GarageBand သည်သင်၏ drive ပေါ်တွင်နေရာများစွာယူထားသည်။ သင်မလိုအပ်လျှင်၎င်းတို့ကိုသိမ်းဆည်းထားရန်မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အပလီကေးရှင်းအချို့ကိုနောက်တဖန်မလိုအပ်တော့ကြောင်းလုံးဝမသေချာပါကအမှု၌သာအနာဂတ်၌၎င်းတို့အားပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းရှိပါစေ။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်ရှင်းပြချက်ကိုကြည့်ပါ Mac ပေါ်မှာဆော့ဗ်ဝဲကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလည်း.
"မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - သင်၏ Mac ကိုမည်သို့သန့်ရှင်းရမည်နည်း"
သင်၏ဖိုင်များကိုသင်၏ hard drive ပေါ်တွင် 3D မြင်ကွင်း သုံး၍ သို့မဟုတ်ဥပမာအားဖြင့်အရောင်အတုံးများနှင့်အတူမြင်တွေ့နိုင်သည့်ပရိုဂရမ်များစွာရှိသည်။ ဤကျေးဇူးကြောင့်သင်ဤဖိုင်များသည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်သည်၊ မသုံးသည်ကိုသင်မြင်နိုင်လိမ့်မည်၊ ဖျက်ပစ်နိုင်သည်၊ ချုံ့သည် (သိုမဟုတ်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်) သို့မဟုတ်ပြင်ပ၌သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်းအနည်းငယ်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်သင်၌ဖိုင်များစွာရှိပါကသင်မလိုအပ်တော့သောအရာများကိုသိမ်းဆည်းရန်စဉ်းစားပါ။ ၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူစေရန်သင်သည်သင်၏ folder (သို့) သင်၏ file ပေါ်တွင် compress လုပ်ရုံဖြင့် right click လုပ်ပြီး "Createaarchive (Create your file)" သို့မဟုတ် "compress (သင်၏ file)" ကိုရွေးပါ။ ထို့နောက် ZIP ဖိုင်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သာသိုလှောင်သိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ ဥပမာ၎င်းကိုပြင်ပ drive သို့သိုမဟုတ် Cloud ကိုလွှဲပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏ Mac မှယာယီဖိုင်များနှင့်ယာယီသိမ်းဆည်းချက်များကိုရှင်းလင်းပါ
Mac OSX ဗားရှင်းအဟောင်းအတွက်၊ ကွန်ပျူတာများကိုပိတ်ထားသည့်အခါညအချိန်တွင် system scripts သည်အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုပုံမှန်မသန့်ရှင်းပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင့်တွင်ဤပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ရန်သင့်အားကူညီနိုင်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များရှိသည်။ ရှဟံ သူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ သင်၏ Mac OS တပ်ဆင်ထားသည့်သင့်ဗားရှင်းနှင့်တူသော Onyx ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုရန်သတိထားပါ။
သက်ဆိုင်သော Mac OS (သို့) OS X ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ ဤစာမျက်နှာများကိုလည်းကြည့်ပါ။
Finder / Applications / Utilities / Terminal မှာလည်းကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Terminal ကိုပြီးတာနဲ့ရိုက်ထည့်ပါ။
Sudo သည် Periodic နေ့စဉ်အပတ်စဉ်လစဉ်
ထို့နောက် Enter key ကိုနှင့်အတူအတည်ပြုရန်။ သင့်ကိုအုပ်ချုပ်သူရဲ့စကားဝှက်တောင်းပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကိုရိုက်ထည့်ပြီးသင့် system ကိုအောက်ပါအတိုင်းလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြီးဆုံးပါက Terminal ကိုပိတ်ပါ။
သင်၏ iOS အရံသိမ်းဆည်းမှုဟောင်းများကိုဖျက်ပါ
သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad သည်သင်တပ်ဆင်သောအခါအလိုအလျောက်အရန်ကူးခြင်းပြုလုပ်သည်၊ သင်၏အရံသိမ်းဆည်းမှုဟောင်းများသည်မလိုအပ်တော့ပါ။ ၎င်းတို့ကိုမည်သို့ဖျက်ရမည်နည်း။
Finder / Library / Application Support / MobileSync / Backup Folder ကိုသွားပါ။
ထို့နောက်သင်၏အရံသိမ်းဆည်းမှုဟောင်းများကို (နောက်ဆုံးပေါ်သောအရာများကိုသိမ်းထားရန်သတိထားပါ) သူတို့ကိုအမှိုက်ပုံးထဲထည့်ခြင်း (ဖျက်ပစ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်အမှိုက်ပုံးကိုသွန်ရန်သတိရပါ) ။
မကြာခဏမေ့သွားသော“ Downloads”,“ Videos” (သို့)“ Music” ဖိုလ်ဒါများသည်တစ်ခါတစ်ရံသင်မလိုအပ်တော့သည့်ဖိုင်များကိုနေရာယူသည် (ရုပ်ရှင်၊ ဓါတ်ပုံများ၊ တေးဂီတ) ။ ပုံမှန်လည်ပတ်ရန်သတိရပါ။
သင်၏ iPhone မှအသစ်ပြောင်းခြင်းဖိုင်များကိုသွားရန်မမေ့ပါနှင့်။ Finder / Library / iTunes / iPhone / Software Updates နှင့်မလိုအပ်သောအရံသိမ်းဆည်းမှုဟောင်းများကိုဖျက်ပစ်ပါ။
Disk ပုံရိပ်များကိုလည်းမကြာခဏမေ့သွားတတ်သည်။ ၎င်းတို့သည် DMG များ (သင် application တစ်ခုကိုသွင်းသောအခါပြသသည်) - ၎င်းတို့အားအမှိုက်သို့ဆွဲတင်ရုံသာဖြစ်သည်။
အာရုံစူးစိုက်မှု ဖြေ။ ။ ပယ်ဖျက်တာကိုအတည်ပြုဖို့နဲ့နေရာပိုများလာအောင်မှန်မှန်ပြန်သုံးဖို့အမှိုက်ပုံးမှန်မှန်မမှန်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ !!
ဤဆောင်းပါးသည် https://www.commentcamarche.net/faq/42349-comment-nettoyer-son-mac တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
carmen sama သည်နောက်ဆုံးတွင် dj အကြောင်းပြောနေသည် (arafat သည်ကမ္ဘာ့အလယ်ဗဟိုမဟုတ်) #palmanews - video
ဆေးရုံဝန်ထမ်းများအတွက်တယောတီးခတ်နေသည့် COVID လူနာတစ် ဦး ၏ဤဗီဒီယိုသည်ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်ပျက်စီးစေခဲ့သည် - BGR